Warbixin: Talibaanka oo soo Rogaalceliyey “Gacanna ka Helaya Ruushka” – Radio Daljir
Warbixin: Talibaanka oo soo Rogaalceliyey “Gacanna ka Helaya Ruushka”
Abriil 27, 2017 2:23 g 0
Xisbiga Talibaan ee Afqanistaan oo raadkoodu ka biloowday Mujaahidiintii Cusaama bin Laden ee Maraykanka, Pakistan, iyo Sacuudigu isku keeneen si ay ula dagaalamaan Midowgii Soofiyeetka ee 25kii Diseenbar 1979 ku soo duulay Afqanistaan ayaa mooddaa in ay mar kale markhaati u yihiin biloowga cusub ee dagaalka qaboow, una dhexeeya isla qolyihii ay shalay la kala safnaayeen. Shalay haddii Maraykanku hubaynayey xulufadii Talibaanka si ay ula dagaalamaan Midowga Soofiyeet/Ruushka, maanta sida wararkii ugu danbeeyey sheegayaan Ruushka oo ah cadowgoodii shalay baa maanta Talibaanka la garab ah.
Laakiin Ruushku wuu beeniyey in uu wax taageero ah u fidiyo Talibaanka.
In cududa Talibaanku xoogaysatay isweydiin ma leh; in ay meel walba oo Afqanistaan ku taal waxay rabaan ka sameeyaan isweydiin ma leh; in magaalooyin cusub ay qabsadeen, kuwa kalena ku soo socdaan waa mid la wada ogyahay iyo xaqiiqo jidha; laakiin waxaa la isweydiinayaa “sidee arrinkani ku dhacay, ayada oo NATO ku dhantahay Afqanistaan, tiir adagna u tahay dawladda Afqanistaan?”
Jawaabtu waa mid adag, laakiin aan ku hormarno wararkii ugu danbeeyey ee asbuucaan iyo hawlgaladii Talibaanka.
Maalinkii Jimcaha (21 Abriil 2017) ayada oo lagu jiro salaaddii Jimcaha waxay Talibaanku weerar qorshaysan ku soo qaadeen xerada Shaaheen ee duleedka magaalada Masaara-a-Shariif, ahna mid ka mid ah magaalooyinka ugu dad badan, uguna casrisan Afqanistaan. Talibaan wata tuutaha ciidamada, qaarkoodna dhaawac la sido iska soo dhigay baa xerada ciidanka albaabka koowaad dhib la’aan ku soo galay, kana gudbay. Albaabka labaad 2 askari bay ku dileen. Albaabka saddexaadna basuukayaal bay kala daaleen, taas oo u sahashay in ay bartamaha xerada dhib la’aan ku soo dhexgalaan. Wixii ka danbeeyana wuxuu isku badalay xasuuq la xasuuqayo ciidanka Afqanistaan. Dagaalku wuxuu socday ku dhawaad 6 saac. Waxaa la dilay tiro ciidanka Afqanistaan oo kor u dhaafaysa 140 askari. Waxaa la dhaawacay tiro ka badan 160 askari. War saxaafadeed ka soo baxay Talibaanku waxay ku sheegteen in tiro ka badan 500 oo askari ay dileen ama dhaawaceen. Talibaanka waxaa laga dilay 5 dagaalamayaal, midna nolol baa lagu qabtay
Maraykanku waa canbaareeyey weerarka Talibaanka wuxuuna ku tilmaamay xasuuq waxuushnimo ah oo aan bini Aadamnimada meel ka soogalin (arag hoos iyo Tweet-ka Abbaanduulaha NATO)
Taliyaha Ciidamada NATO ee aagga Afqanistaan wuxuu horay u sheegay in dagaalka Afqanistaan uu yahay “barbardhac” illaa iyo hadana Talibaanka taag loo la’yahay
Jananka USA ee ciidamada ka hawlgala Afqanistaan, General John Nicholson, wuxuu yiri dagaalku waa isbadalay, hadana dawladda Ruushka ayaa si toos ah u taakulaynaysa Talibaanka
Wasiirka Difaaca ee USA, General Jim Mattis (Mad Dog), wuxuu asna Isniintii tagay Kabul, wuxuuna yiri “Ruushka waa is arkaynaa, waana u sheegaynaa in waxa ay samaynayaan tahay sharci darro”
Siyaasiyiinta qiimeeya dagaalada ayaa dagaalka Afqanistaan hadda ku tilmaamaya in uu yahay “mid dhumay” ayaga oo tusaale u soo qaata bumbadii weynayd ee nukliyeerka u dhawayd ee buurta Afqanistaan lagu garaacay in ay matalaad u tahay “caalwaa!” Waxay yiraahdeen “dagaalka argagixisadu haddii uu AK47 dhaafo rajo ma leh, haddana wax nukliyeer u dhow buu marayaa, taas macnaheeduna waxaa weeye wixii kale oo dhan waa shaqayn waayeen.”
Xog ALJAZEERA qortay sannad kahor waxay ku bidhaamiyeen in Talibaanku aysan nabad iyo wadahadal toona rabin, lana gali doonin dawladda Afqanistaan, maxaa yeelay guushu ayaga ayey u dhowdahay
Talibaanku hadda ku dhawaad 40% dalka ayaga ayaa si toos ah ama si dadban gacanta ugu haya
Intaas oo ciladood oo dawladda Afqanistaan haysata, weli waxaa xal loo la’yahay muranka iyo khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta iyo huggaamiyayaasha Siyaasadda iyo waliba kuwa qabaa’ilka, wuuna sii kordhayaa, ayaga oo aad mooddid in aysanba wax war ah u hayn xaalka dalku marayo. Afqanistaan, marka Soomaaliya laga tago, waxay ku jidhaa meelaha ugu musuqmaasuq badan adduunka, jago dawladeedna waxaa badanaa loo raadshaa si loogu helo maal iyo awood lagu muquuniyo siyaasiyiinta garabka kale.
Xisbiga Talibaan ayaa ayaguna isku arka in ay yihiin xaq-u-dirir, ayna xaq u leeyihiin in ay la wareegaan talada dalka, wixii horistaagana cagta mariyaan.
Ku dar oo dibi dhel e, waxaa Afqanistaan iyo jihada ay u socoto isku haysta dhammaan dalalka dariska la ah, kuwa bariga dhexe, iyo reer Galbeedka.
Intaas oo dhib ah oo la soo maray, shacabka Afqanistaan oo dhibka iyo dib-u-dhaca ugu weyn ay u gaysteen Talibaanku 23kii sano ee la soo dhaafay, waxay gaareen horumar la taaban karo, laakiin waxay weli ku taamayaan dawlad shacabka matasha, matali karta, caaddil ah, oo musuqmaasuq ka reeban.
Maqaalo Kale 268 Wararka 19730
Gadoon oo 14 Qof u Geeriyootay Shubanbiyoodka
Daacuun ka Dillaacay Balanballe